သိသူဖော်စား…မသိသူကျော်သွား အိမ်သုံးဆားရဲ့  အသုံးဝင်ပုံများ… | yathar Magazine
သိသူဖော်စား…မသိသူကျော်သွား အိမ်သုံးဆားရဲ့  အသုံးဝင်ပုံများ…
ဧပွီ 25, 2020
ဒီလို Stay at Home ကာလမှာ အိမ်မှာပဲနေနေရတော့ ကြာလာတော့ လူက ပျင်းလာပါလေရော…စားချင်တာလည်း မစားရဘူး သွားချင်တာလည်း မသွားရတဲ့အခါမှာ စိတ်ကလည်းမကြည်လင်နေတော့ဘူးလေ…
စိတ်မကြည်ရင် မျက်နှာလေးကလည်း ဘယ်လိုမှ ကြည်လင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခုလိုရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ထဲမှာပဲနေတာက ကိုယ့်အတွက်ရော တစ်ခြားသူတွေအတွက်ရော တကယ်ကို အမှန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲနော်။
ဒါဆို အိမ်ထဲကနေ ဆက်ချောရင်း ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်မယ်ကွယ်
အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ အပျင်းလဲပြေတယ် ပြုလုပ်ရတာလည်းလွယ်ကူပြီးတော့ ကိုယ့်အလှအပအတွက်လည်း တကယ်ကို အကျိုးရှိတဲ့ အရာလေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်လေ ။ အိမ်တိုင်းရဲ့ မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ အိမ်သုံးဆားလေးတွေရှိကြတယ်ဟုတ်…
ဆိုဒီယမ်နှင့်ပိုတက်စီယမ်စတဲ့ ဓာတ်သတ္တုတွေပါဝင်တဲ့ ပင်လယ်ဆားဟာ အလှအပအတွက် တကယ်ကို အကျိုးတွေ အများကြီး ရှိတယ်နော်
ဒါဆို ချစ်တို့ရေ ကပ်ကြီးအပြီးမှာ ဆက်ပြီးချောနိုင်ကြစေဖို့ အခုနည်းလေးတွေကို အတူတူပြုလုပ်ကြည့်ရအောင်
ဆားက မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ချွေးပေါက်တွေကို သန့်ရှင်းစေပြီး အစိုဓာတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တယ်။ သူက ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ၀က်ခြံတွေထပ်မဖြစ်နိုင်အောင်လည်း တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ ဆားနဲနဲရယ် ပျားရည်လေးရယ် ရောပြီး မျက်နှာအနှံ့ညင်ညင်သာသာလေးပွတ်တိုက်ပေးပါ ။ ပျားရည်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေကလည်း အလှအပအတွက်ဆို အံ့မခန်းပဲမို့ ဒီနှစ်ခုကအလိုက်ဖက်ဆုံးအတွဲလေးလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ညိုညစ်နေတဲ့ မျက်နှာလေးတွေကို ကြည်လင်ပြီး သန့်စင်သွားမှာပါ။
၂။ ဆားရေ Spary လေးဖြန်းမယ်
လေထုထဲကဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေက ချွေးပေါက်တွေကျယ်နေတဲ့အခါ ချွေးပေါက်ထဲဝင်တော့ ဆားဝက်ခြံဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ နှာခေါင်းတ၀ိုက်မှာ အများဆုံးရှိတတ်ပြီးတော့ ညှစ်လိုက်ရင် အဖြူရောင်အဆီတောင့်လေးတွေထွက်လာတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေဟာ ညှစ်လိုက်လေ ပွားလာလေပါပဲ။ အဆီခဲတွေထွက်သွားတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့နေရာကချွေးပေါက်တွေ ဖြစ်သွားပါလေရော …
အဲ့ဒီချွေးပေါက်လေးတွေ ကျဉ်းစေဖို့ နဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကင်းဝေးစေဖို့ဆိုရင် အများကြီးမလိုပါဘူး။ ဆားရယ် ရေနွေးနွေးလေးရယ် စပရေးဘူးရယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရည်ကို မျက်နှာပေါ်ဖြန်းပေးရမှာပါ။တစ်ပတ်မှာ ၂ခါလောက်ပြုလုပ်ပေးရင် သိသာတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုရလာမှာ အမှန်ပါပဲနော်။
Scrub တိုင်းမှာ မပါမဖြစ်ပါတာကတော့ ဆားပါပဲ။ ဒါဆို Scrub လုပ်ဖို့ အလွယ်ကုဆုံးနည်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။ အများကြီးမလိုပါဘူး ဆားရယ် သံလွင်ဆီရယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီအလွယ်တကူမရှိဘူးဆိုရင် အုန်းဆီနဲ့လည်း ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ တကယ်ကို အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းလေးပဲ ။ အဲ့ဒီကို နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ ရေချိုးခါနီးသေချာလေး နေရာအနှံ့ပွတ်လူးပြီး ရေလေးချိုးချလိုက်ရုံပဲ။ ပြီးရင် Lotion လူးဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်။
ဗောက်ဆိုတဲ့အရာက အတော်လေးယားယံပြီးတော့ နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့အရာပါ။ လူကြားထဲရောက်ရင် ကုပ်ရမှာလည်းရှက် ကုပ်လိုက်ပြန်ရင်လည်း အဖြူဖတ်တွေက အင်္ကျီပေါ်တွေ ကျလာတော့ ဘယ်လိုမှကိုအဆင်မပြေပါဘူးနော်။ ဒါဆိုတော်တော်လွယ်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။ ဆံပင်ကိုအရင် ရေဆွတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဆားလက်တစ်ဆုပ်ကိုယူပြီး ဆံပင်ခွဲကြောင်းတွေအတိုင်း ပွတ်ပေးပါ။ဆားတွေ အရည်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ကြက်သီးနွေးရေလေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ချလိုက်ပါ။တစ်ပတ်မှာ ၂ခါလောက်ပြုလုပ်ပေးပါနော်။ဒါဆို ဗောက်ပြသနာကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်။
လက်သည်းအရှည်တွေတော့ထားပါရဲ့ ခဏခဏကျိုးနေမယ် ဂျွတ်ဆတ်နေမယ် လက်သည်းပိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှလှနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကျန်းမာတဲ့လက်သည်းလေးတစ်စုံရဖို့အတွက်ဆိုရင် ဆားရဲ့ အကူညီလေးကလည်းမပါမဖြစ်ပါပဲ။ ဆားတစ်ဇွန်းရယ် Baking Soda တစ်ဇွန်း ၊ သံပရာရည်တစ်ဇွန်း၊ရေနွေးတစ်ဇွန်း ဒါတွေပဲလိုအပ်ပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုရောမွှေပြီး လက်သည်းလေးတွေကို စိမ်ထားပေးပါ။၁၅မိနစ်လောက်အကြာမှာ ရေဆေးချလိုက်တဲ့အခါ ကြည်လင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့လက်သည်းလေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ..ဘယ်လောက်ထိလွယ်လိုက်လဲနော်။
အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီး အသားရည်တွေ ညိုညစ်နေလား?
ချွေးပေါက်လေးတွေထဲက အညစ်အကြေးတွေရော ရှင်းပစ်ချင်လား ?
သုံးနေကျ Scrub တွေကလည်း ကုန်တော့မယ်ဆိုပြီးရော တွေးပူနေလား ?
ဗေါက်တွေလည်း ထနေလို့ စိတ်ညစ်နေလား ?
လွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အိမ်သုံးဆားလေးအနားမှာရှိနေတာမို့ စိတ်မညစ်ကြပါနဲ့တော့နော်။
နောက်ပြီးတော့ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ information တွေသိဖို့ အတွက်ကိုလည်း yathar pageကို Like or See First လုပ်ထားပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း yathar application ကို download လုပ်ပြီး စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်လို့ ဒီနေရာကနေ ပြောပါရစေနော်။
အားလုံးပဲ ကပ်ကြီးအပြီးမှာ ဆက်ပြီးချောနိုင်ကြပါစေ။